Tirada na soo booqday.	Maanta36683shalay25830Isbuucaan146227Isbuucii hore260142Bishaan809835Bishii hore1319148Maalmaha oo dhan5947153Hadda Waxaa toos ugu jiraan: 470 guests, 3 members Your IP: 184.73.7.143 , Today: Jun 19, 2013	Ganacsiga Warshadaha oo Kusoo badanaya deegaanada Somaliland lamagac baxay.
Written by Maamul on 06 January 2013. Ganacsiga dhanka warshadaha ah ayaa kusii kordhaya deegaanada dhaca waqooyi galbeed Soomaaliya ee Faah Faahin:Dagaalkii Maanta Gedo ka dhacay, 3 Gaari Oo Amxaarada Lagubay iyo Maxaabiis laqabsaday.
Written by Maamul on 05 January 2013. Dagaallo culus oo saacado badan qaatay ayaa maanta gelinkii dambe ka qarxay duleedka degmada Luuq ee Yuusuf Xaaji "Majirto Cid Go'aan ku Gaartay Somaalida Halaga Barakiciyo Nairobi" Dhageyso.
Written by Maamul on 05 January 2013. Ciidanka Kenya ayaa kordhiyay dhibaatada ay ku hayaan shacabka Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Islii Qalaanqal Amni iyo Mid Siyaasadeed Oo Boosaaso Ka jira,Faroole oo kulan adag la qaatay.. (Warbixin).
Written by Maamul on 05 January 2013. Xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa xarumaha maamulka Puntland ee magaalada Boosaaso 24-saacadood C/llahi Saciid Samatar” 8-da January kadib Maamul ayaannu kudhawaaqi doonaa” Faroolana..(Dhagayso Wareysi)
Written by Maamul on 05 January 2013. Siyaasiga Cabdullahi Sacaiid Samatar ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay idaacada Islaamiga ah Alfurqaan Dhagayso:Dhalinyaro Soomaali ah oo Lagu Tacdiibiyay Dalka Liibiya.
Written by Maamul on 05 January 2013. Dowladda Liibiya ee KMG ah ayaa dhibaata xoogan ku heysa dadka muhaahiriinta ah ee shaqada u raadsada Ansaaru Diin Oo Ku Adkeysatay in ay Waqooyiga Maali Ku Maamuleyso Shareecada Islaamka.
Written by Maamul on 05 January 2013. Mujaahidiinta Ansaarudiin ee wadanka Maali ayaa sheegay in ay sii wedi doonaan dagaalka jihaadka ah Iiraan Oo Kacdoonka Suniyiinta Ciraaq Ku Tilmaantay Shirqool ka dhan ah Shiicada.
Written by Maamul on 05 January 2013. Xilli uu xoogeystay kacdoonka muslimiinta sunniga Ciraaq ayay xukuumadda shiicada Iiraan ku dhawaaqday Muslimiinta Itoobiya Oo Bilaabay Kacdoon ka dhan ah Gumeysiga.
Written by Maamul on 05 January 2013. Boqolaal kun oo katirsan muslimiinta Itoobiya ayaa bilaabay kacdoon ka dhan ah Nasaarada wadankaasi x
Qarax khasaare geystay oo ciidamada Afrikaanta lagula eegtay Marka.
Written by gobal on 05 January 2013. Kolonyo ka tirsan Ciidamada Afrikaanta ayaa goor dhaweyd qarax weyn lagula eegtay gudaha magaalada Marka Ciidamada Afrikaanta oo xalay lagu weeraray duleedka magaalada Marka.
Written by gobal on 05 January 2013. Ciidamada Mujaahidiinta Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/Hoose ayaa xalay saqdii dhexe weerar ku qaaday Dagaallo culus oo xalay Muqdisho ka dhacay.
Written by gobal on 05 January 2013. Dagaallo culus ayaa xalay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho ka dib markii cutubyo ka tirsan Ciidamada Cabdi Raxmaan Gablax Oo Sheegay in Puntland Maalmaha Soo Socda Xaalad Adag Geli doonto Wareysi.
Written by Maamul on 04 January 2013. Siyaasiyiinta mucaaradsan maamulka Faroole ayaa ka digay in maalmaha soo socda ay dagaallo ka dhici Xildhibaan Dalxa "Dhibaatada lagu Hayo Somaalida Dibadda ku nool DF-ka ayaa Wax ka og" Dhagayso.
Written by Maamul on 04 January 2013. Xilli ay sii kordhayaan dhibaatooyinka ay dowladaha shisheeye ku hayaan shacabka Soomaalida ayay DF-ka Dhagayso:Maxkamadda Wilaayada Galguduud Oo Bayaan kasoo saartay Colaaddii u dhaxaysay Reer Xaaji Saleeban iyo Duduble.
Written by Maamul on 04 January 2013. Maxkamadda wilaayada Islaamiga Galguduud ayaa soo saartay Bayaan muhiim ah oo ku aadan xal ka gaarista Dagaallo Saacado Qaatay Oo ka dhacay Duleedka Boosaaso.
Written by Maamul on 04 January 2013. Dagaal culus ayaa xalay saqadii dhexe illaa iyo saaka aroortii hore ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso Jebinta Sil-siladaha... Qiso dhab ah oo ku saabsan Raggii dilay Jhon Granville (WARBIXIN) Written by Maamul on 03 January 2013. Mu'assa'sad Warbaahineed oo islaami ah oo lagu magacaabo " Al-Hijrateyn" ayaa dhowaan baahisay Filim Dhagayso:Ganacsatada Somaalida Kenya Oo Ka digay in Boob Hor leh laga geysto Xaafadda Islii.
Written by Maamul on 03 January 2013. Ciidamada Kenya ayaa weli magaalada Nairobi kasii wada dhibaatada ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed Sheekh Mullah Nadiir Oo la Sheegay in Uu Shahiiday (Xog Kooban).
Written by Maamul on 03 January 2013. Warbaahinta Reer galbeedka iyo midda Pakistan ayaa baahisay in ladilay Sheekh Mullah Nadiir oo kamid Khaliif Ciise Mudan "Al Shabaab Halis ayay ku yihiin Maamulka Puntland".Dhagayso.
Written by Maamul on 03 January 2013. Maamulka Puntland ee cadawga la shaqeeya ayaa ku dhawaaqay in xarakada Shabaabul Mujaahidiin ku xooganyihiin In Kabadan 40 Qof Oo Kenyaan ah ayaa 3 Maalmood Gudahood dhimatay.
Written by Maamul on 03 January 2013. Khasaara xoogan ayaa ka dhashay shilal siyaaba kala duwan uga dhacay sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay Beesha Maxamuud Hirab Oo loo Xukumay 100 Halaad Geel ah iyo Beesha Reer Xaaji Saleebaan Oo loo Xukumay 2,800 Halaad (Dhagaysi+Akhris).
Written by Maamul on 03 January 2013. Waxaa heer gaba gaba ah maraya shirkii lagu Heshiisiinayay beelihii dhawaan ku dagaalamay deegaanno Daalibaan Pakistan: " Isha rasmiga ah ee Wararkeena faafin karta waa Omar Media Foundation". Written by Maamul on 03 January 2013. Xarakada islaamiga ah ee daalibaan Pakistan ayaa soo saartay Bayaan muhiim ah, kaas oo ku shaacineyso Ciidamada Xarakada Al Shabaab Oo Dagaal Kula Wareegay Deegaanka Awdiinlle.
Written by Maamul on 03 January 2013. Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal saacadi qaatay oo shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka Start«61626364656667686970»End	Si Fudud ubaro Qur'aanka Adigoo Joogo Gurigaaga Online Riix Halkan